Macalinka kooxda Viktoria Plzen oo qorsheenaya in kulanka caawa ay Real Madrid kaga yaabsadaan Santiago Bernabue – Gool FM
(Champions League) 23 Okt 2018. Macalinka kooxda Viktoria Plzen Pavel Vrba ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa ay dooneyso in ay layaab ka sameyso kulanka Champions League ay caawa ku booqan doonaan Real Madrid garoonka Santiago Bernabue.
Pavel Vrba ayaa dhinaca kale sheegay inuu ixtiraamayo kooxda Real Madrid inkastoo ay kulamadii lasoo dhaafay ay la kulmeen natiijooyin xun, wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay inay sii ahaan doonaan koox heysata waxyaabo badan.
“Waxaan ixtiraam badan u heynaa kooxda Real Madrid, waana kooxda ugu fiican aduunka, in kasta natiijooyinka xun ay la kulmeen kulamadii lasoo dhaafay, hadana waa koox heysata waxyaabo badan”.
“Real Madrid waxay guuldaro kala soo kulantay CSKA Moscow gool xili hore ee ciyaarta dhashay, CSKA waa koox difaac adag leh, taasoo sababtay in Real Madrid ay ku guuldareysato inay dhaliso wax gool ah, inkastoo ay sameeyeen fursado badan”.
“Real Madrid waxay heysataa ciyaartoy ugu fiican aduunka, waana inaan ixtiraamnaa, inkastoo aan dooneyno inaan kaga yaabsano kulanka caawa ee garoonka Santiago Bernabue”.